Namuhla, amawashi kukhona izimpahla hhayi kuphela ezibalulekile futhi ezidingekayo, ukuvumela ithrekhi isikhathi, kodwa futhi-accessory ye-fashion ukuthi ngezinye izikhathi abiza imali eshisiwe.
Lapho kuphakama umbuzo, yini ukunikeza emkhosini ethile, kanye kukhona inqwaba imicabango. Ekugcineni, sivamile bafinyelela esiphethweni ukuthi indlela compact, njengabo iwashi, ukuze babe the best eyodwa isipho. Kodwa lapha kuvela enye inkinga, okungukuthi, ukuba khona eziningi izimpawu ezihlukahlukene, izinkolelo-ze futhi anamahlazo elihlobene ne isipho esinjalo. Njengoba wazi, kusukela kunoma yimaphi imithetho, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho. Masizame ukuphendula umbuzo - kungenzeka ukunikeza iwashi.
Main ukukholelwa ezeni enqabela uthi 'akunakwenzeka ukunikeza ngento ebukhali, "ngoba, ngendlela efana uma" usike' Intambo budlelwane emkhatsini umuntu upha nomamukeli yayo.
Imicibisholo Clockwork ngokuvamile ube semikhawulweni abukhali, Ngakho-ke, ngokuvumelana izimpawu, uma ufuna ukuqhubeka ukuxhumana nomuntu, kungcono ukukhetha kuye njengesipho okunye okuhlukile.
Kodwa ake uze umbuzo ukuthi kungenzeka ukunikeza nemini, ngakolunye uhlangothi, ngokuvumelana uphawu ngenhla.
Uma isipho kuyoba imbangela ikhefu ubudlelwane nomngane oseduze ke, yebo, ukuthi inketho okunjalo kungahlali kithi. Kodwa kuthiwani uma indoda uyosabalala isixhumanisi ne engumashiqela-ekhaya abakhulu beboshiwe? Vele kuleli cala best choice isipho nomqashi wakho, futhi intando, isibonelo, iwashi odongeni. Kwayanelisa, futhi ngeke Ngethemba ukuthi ubasi bayovuka ngokusebenzisa kwababusi, futhi mhlawumbe akhulule indawo yakho ngawe.
Uma umphathi akazi noma akakholelwa namabika, silindile ingavuthi isikhumbuzo nje ezinhle ekupheleni kosuku. Kodwa khumbula ukuthi uma njalo ngasekupheleni, yokwephula zabasebenzi isiyalo, nge ukuvela ehhovisi mshini ikhanda, okusikhumbuza isikhathi, wena engozini goodbye phakade, ukuza amaminithi ambalwa kamuva (bheka ngisho ngaphambi kwekhefu ebuhlotsheni ngokuya yakho ukuxoshwa eduze).
Vele ungakhohlwa ukuthi iwashi zingase zingabi, eqinisweni, noma yini enganikeza umuzwa ethile. Ngokwesibonelo, uma umqashi uzokunika iwashi, akunakwenzeka ukuthi uyokwenza ukuba gudlisela kwa ukuxoshwa yakho. isipho Iningi uzonikezwa ukwazisa lo msebenzi omuhle, futhi mhlawumbe njengoba mfana ngesikhathi ukubambezeleka njalo, noma okuphambene nalokho, uma - Bani ezibulala ngomsebenzi, ke isikhumbuzo sokuthi indoda akumelwe umsebenzi kuphela, kodwa futhi uphumule.
Hhayi kuwufanele ingozi futhi unike iwashi intandokazi, kodwa ungakwazi ukunikeza kubo, isibonelo, mabhuku unesizungu, okuyinto esalibele emsebenzini kanye nethimba kunalokho ukhathele. Nokho, ngesikhathi esifanayo, kubalulekile ukuba sikhumbule ukuthi lesi sipho kungase kubhekwe njengokwelapha isifumbathiso ukuze noyisikhulu ukusebenza imisebenzi esemthethweni.
Futhi kungafaneleka ukuba ukwethula amawashi, isibonelo, udokotela ohlinzayo noma Udokotela Weqolo, ngaleso sikhathi uye wasiza, kodwa ukubuya lapho akekho ofuna. Ngakho, uphawu Kungakusiza ngisho.
Nikeza amahora kuphela uma uqinisekile ngamaphesenti ayikhulu ukuthi akukho lutho olungalungile nawe lesi sipho ngeke.
EChina, zamukele iwashi isipho kusho ukuthola "isimemo emngcwabeni wakhe siqu." Indoda Japanese ecubungula isipho izifiso siqu ukuba ukufa okusheshayo. Kulokhu, ukungazi aphansi amasiko yezwe izobonwa njengoba pas Faux.
Ngokuvamile, kuzo zonke izizwe naphansi lizwe iqembu lalo yezinkolelo-ze. Lesi sibonakaliso ingeyona abantu bethu, ngakho-ke, asisebenzi kithi - akuyona izaba?
Kungenzeka yini ukunikeza iwashi lwami lokuzalwa?
Kulokhu, yokuthi isipho esinjalo akuxhomekile ngokwako. Uma ungakwazi ukunikeza umkhiqizo izinga, futhi ukwazi ukuthi isipho izotholwa ngokufana ncamashí ubuqonde, yini umehluko, ngasiphi isizathu na?
Anganika amahora ngaphandle kwesizathu, ukuze nje ajabulise indoda, ngoba akekho owathi ukuthi akhona kumele kubize. Ungakhetha futhi akwamukeleki intengo ububanzi kanye nomklamo ongakhetha.
Umbuzo - kungenzeka ukunikeza iwashi noma azinakho kunomvuzo, wonke umuntu kufanele baphendule ngokwakho. Okubaluleke kakhulu, ungayeki iwashi indoda uma akathandi nesisekeli noma kungekho ukusetshenziswa kwalo ezinjalo, bakubheka njengobuthakathaka ezingadingekile. Kulokhu, kungakhathaliseki ukuthi intando, isipho nje awukuqondi.
Kodwa cabanga esimweni lapho umuntu uvale ziyahlanya ufuna uphawu amawashi aphambili, futhi une ithuba lokwenza kuye leso sipho. Ingabe ucabanga ukuthi kungenzeka ukunikeza iwashi?
Khumbula ukuthi into esemqoka - hhayi izipho, kanye nomlingiswa siqu kuye, ingqondo nemizwelo yabantu, okuyinto ungase ucabange. Uma wazi umuntu kahle, ngakho-ke angeke kube nzima ukwenza ukukhetha okufanele.